Man Utd Oo Xaqiijisay Soo Laabashada Cajiibka Ah Ee Ronaldo – Garsoore Sports
Man Utd Oo…
Xiddiga Juventus ayaa qarka u saaran inuu ku laabto Old Trafford kaddib markii uu Turin diyaarad qaas ah kaga dhoofay Jimcihii
Manchester United ayaa xaqiijisay inay heshiis la gaartay kooxda Juventus si ay ugala soo wareegto xiddigoodii hore ee Cristiano Ronaldo.
Wakiilka Ronaldo Jorge Mendes ayaa u soo bandhigay weeraryahankii hore ee Red Devils Man City kaddib markii ay waayeen bartilmaameedkooda koowaad ee xagaaga oo dhan ee Harry Kane, laakiin City ayaa isaga hartay tartanka Jimcihii.
Taasi waxay u saamaxday United inay sameyso dalab ay ku dooneeyso in 36 jirkan ay dib ugu soo celiso Old Trafford, halkaasoo uu xiddig ka ahaa intii u dhaxeysay 2003 iyo 2009.
Waxaa la fahamsan yahay in heshiiska la isku raacay uu yahay 13 milyan ginni oo marka hore la bixinayo oo lagu daray ilaa £7 milyan oo kale.
Ronaldo ayaa lagu wadaa inuu Old Trafford ka qaato adduun lacageed gaaraya 500,000 oo milyan oo ginni isbuucii, waxaana saxiixiisa Rasmiga lasoo bandhigi karaa 24ka saacadood ee soo aaddan.
Bayaan ay kusoo qoreen mareegaha kooxdooda, United ayaa ku tiri: “Manchester United waxay ku faraxsan tahay inay xaqiijiso in kooxdu ay heshiis la gaartay Juventus oo ku aadan kala iibsiga Cristiano Ronaldo, iyadoo ku xiran heshiis shaqsiyeed, fiise iyo caafimaad.
“Cristiano, oo shan jeer ku guuleystay Ballon d’Or, wuxuu ilaa hadda ku guuleystay 30 koob oo waaweyn intii uu ku jiray xirfadiisa, oo ay ku jiraan shan horyaal oo UEFA Champions League ah, afar FIFA Club World Cup, todobo horyaal oo Ingiriis, Spain iyo Italy ah, iyo Horyaaladda Xulalka Yurub ee la qaaday dalkiisa Portugal.”
“Waayihiisii ugu horeeyay ee Manchester United, wuxuu dhaliyay 118 gool 292 kulan oo uu ciyaaray, qof walba oo kooxda ka tirsan wuxuu rajeynayaa inuu Cristiano kusoo dhaweeyo Manchester”.